Ọrụ - Yuxin Wright Industrial Prototype Co., Ltd.
Aluminom Die Nkedo
Akụkụ Nkwurịta Okwu
Medical Ngwaọrụ Parts
Akụkụ Ike Ọhụrụ
Prototyping na Manufacturing na Na-Projectlọ Project Management
Yu Xin Wright na-enye usoro ihe omimi niile na ọrụ nrụpụta. Emechara usoro nke usoro a n'okpuru otu ụlọ ahụ. Ndị injinia anyị dị njikere iji nyere aka na atụmatụ, nhọrọ ihe, yana eserese CAD gị. All anyị mmepụta ngalaba na-ejikọrọ maka mma nkwurịta okwu, nche, na arụmọrụ. N'agbanyeghị oru ngo size, ọ bụla ahịa nwere zuru arọ nke ọrụ anyị n'azụ ha.
Nọrọ na isi nke CNC n'ichepụta ike, anyị na-ahu nagide kacha-elu ígwè onwem na ọhụrụ na-akwado software. Ndị injinia anyị na-anọgide na-ebute ụzọ nke usoro ọrụ na mmepe, na-ebute ike nrụpụta na-enweghị atụ. Iji nchịkọta anyị nke igwe 3, 4- na 5 axis, anyị nwere ike ijikwa ọtụtụ ngwa site na iji ọtụtụ ọla, alloys, na plastik. Nwee akụkụ zuru oke, rụchara ọla dịka obere ụbọchị 2-5.
Ọrụ 3D Mbipụta
3D ebi akwụkwọ bụ ọhụrụ mmepe na prototype e kere eke. Iji SLA na SLS ebi akwụkwọ, Yu ​​Xin Wright Tech nwere ike ịmepụta ihe ziri ezi, obere, ihe nnọchianya nke imewe gị naanị n'ime 24-48 awa! 3D porotypes dị mma maka ịchọpụta ọrụ ngwaahịa, na-akọwa echiche, ma ọ bụ na-atọ ụtọ maka itinye ego.
Mpempe akwụkwọ ígwè siri ike, dị mfe, ma mara ewu ewu. Mpempe akwụkwọ na-eguzogide ọgwụ ma corrosion na okpomọkụ. Enwere ike iji ọtụtụ ọla gụnyere tin, igwe anaghị agba nchara, nickel, ọla kọpa na aluminom na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ. Mpempe akwụkwọ na-enye ohere maka imewe na imepụta ụdị na aghụghọ dị mgbagwoju anya, na-etinye akụkụ ndị ejiri mpempe akwụkwọ rụọ na ụlọ ọrụ dị elu na ụwa.
Emepụta ọtụtụ puku yiri na mgbagwoju plastic akụkụ ngwa ngwa na plastic injection ịkpụzi ọrụ site Yu Xin Wright. Akụkụ e ji plastik mee bụ kemịkalụ, ihe ọmụmụ, yana iguzogide gburugburu ebe obibi na-eme ka ha baa uru n'ofe ọtụtụ ọrụ. Ihe nkedo nkedo plastik na aru oru di iche iche di iche iche di iche iche, nke obula nwere ike mechaa maka odi iche n'ime ulo. Anyị nwere ike ịmepụta ihe eji arụ ọrụ aluminium dị mgbagwoju anya dị ka ụbọchị 5-7. Enwere ike ịmepụta ngwaọrụ n'ime izu 2-4 site na iji P20 nchara.
Die mgbatị Nleta metal ihe n'ime shapes mere gị nkọwa. A na-anwu anwu na akụrụngwa CNC anyị, wee jiri ya mepụta nkedo ọla ndị ahụ. Nkedo na-mma na nyochara, na ọtụtụ gụchara ọrụ nwere ike etinyere maka ịba uru na ịchọ mma na nzube. Anyị nwere ike iwepụta ngwaọrụ ndị anwụrụ naanị n'ime izu 2-4 site na iji H13 nchara. Anyị na-enyekwa: Leak Testing, impregnation, Anodizing, Powder Coating, Inserts, secondary machining, and nhicha.
Silicone Rubber Nkedo
Ihe ejiri roba roba mee na-eguzogide ọgwụ, kemịkalụ, ọkụ eletrik anaghị emetụta ya, ọ na-adịgide adịgide n'okpuru oke ọnọdụ. N'ezie, Liquid Silicone Rubber (LSR) dị oke mkpa n'ihi na ọ nwere ojiji n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla gburugburu ụwa. LSR dị n'ọtụtụ agba, enwere ike iji ya bipụta akwụkwọ 3D, enwere ike iji ya na ịkpụzi ọgwụ iji mepụta puku kwuru puku.
Anyị nwere ngalaba na-agwụcha ngalaba nwere ike itinye ọtụtụ mkpuchi na-enweghị atụ ma gwụchaa ọrụ gị. Ọrụ ndị na-emecha emecha na-enye ọhụhụ na ogologo oge maka prototypes, n'ichepụta obere okike, na imepụta ihe dị ala. Maka otu agba dị iche, anyị na-eji sistemụ agba agba Pantone maka oke oke yana enweghị njikọ.
Adreesị:No20, Zhipu okporo ụzọ, Qiandeng Town, Kunshan City, China